नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको चिया को चुस्की सँगै मन्द मुस्कान छरेको यो फोटो भर्खरै लिइएको फोटो हो, अब यो हाँसोले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सँघीयता माथि कती षड्यन्त्र हुने हो ? ककसको निन्द्रा हराम हुने हो ? किन मक्ख परेर हाँस्नु पर्या होला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि हगी !!!
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको चिया को चुस्की सँगै मन्द मुस्कान छरेको यो फोटो भर्खरै लिइएको फोटो हो, अब यो हाँसोले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सँघीयता माथि कती षड्यन्त्र हुने हो ? ककसको निन्द्रा हराम हुने हो ? किन मक्ख परेर हाँस्नु पर्या होला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि हगी !!!
Posted by www.Nepalmother.com at 11:39 PM
Anonymous August 2, 2012 at 12:34 AM
षडयन्त्र त नहोला अव सवैले बुझिसकेका छन् । देशलाइ लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सँघीयता को काँधमा टेकेर मेटाउन खोज्ने हरुको नै निन्द्रा हराम हुनेहोला ।।